मुना हत्याकाण्ड: सामसुङको मोबाइलमा के हेर्थे विजय ? - हाम्रो देश
२५ फाल्गुन २०७७, मङ्गलवार Tuesday, 09 March, 2021
मुना हत्याकाण्ड: सामसुङको मोबाइलमा के हेर्थे विजय ?
काठमाडौं : मुना कार्कीको हत्या गरेर आत्महत्या गरेका विजय चौधरी र मुनाको मोबाइल महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको फेरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ । मोबाइलमा ‘के कस्ता गतिविधि गर्थे’ भन्ने विषयको अनुसन्धान गर्न चौधरी र मुनाको मोबाइल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक टेकप्रसाद राईले बताए ।
सीसीटीभीमा विजयले नै मुनाको हत्या गरेको पुष्टि भएपनि अरु पनि कुनैको संलग्न थियो कि भन्ने आशंकाका आधारमा मोबाइललाई फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको एसएसपी राईले बताए । ‘फरेन्सिक ल्याबमा मोबाइलमा के–के चिजहरू थिए, फोटोहरू खिचेर डिलिट गरेको थियो कि ? कुनै भिडियो हेर्ने गर्थ्यो कि भन्ने विषयमा अनुसन्धानको लागि पठाइएको हो,’ उनले भने ।
प्रहरीले अनुसन्धानको अधिकांश पक्ष सकिएको जनाएको छ । सीसीटीभी फूटेज लगायतका सबै पक्षलाई हेर्दा विजयले मुनाको ह’त्या गरे’को देखिएको छ । त्यसबाहेक पनि विजयलाई कसैले सिकाएको छ कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको महानगरीय प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।
विजय चौधरीका बुवा जीवन चौधरीले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा घ’टनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गरिपाउँ भन्दै जाहेरी दिएका छन् भने अर्जुन कार्कीले पनि घरमा ठीकै रहेकी पत्नीको ह’त्याको रह’स्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कार’वाही गरिपाउँ भन्दै जाहेरी दिएका छन् ।
‘बुधवार विजय चौधरीका बुवा जीवन चौधरीले श’व बुझेर दाङ लगेर दा’हसंस्कार गरेका छन् भने अर्जुन कार्कीका परिवारले पनि मुनाको दा’हसंस्कार गरेका छन् ।
प्रहरीले मृतक दुवै जनाको पोस्टमार्टम समेत गराएको छ । मुनाको घाँ’टी थि’चेर मृत्यु भएको पोस्टमार्टममा देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ललितपुर परिसरका प्रमुख राईले चौधरीको पोमार्टमको रिपोर्ट आई नसकेकाले के कारणले मृत्युभयो भन्ने बताउन नसकिने बताए ।